Taunggyi Time (တောင်ကြီးတိုင်းမ်): ပအိုဝ်းလူငယ်များနှင့်တွေ့ဆုံခြင်း (သို့) PNO ဘာလဲ? PNO ဘယ်လဲ?
ပအိုဝ်းလူငယ်များနှင့်တွေ့ဆုံခြင်း (သို့) PNO ဘာလဲ? PNO ဘယ်လဲ?
သစ္စာရှင် (တောင်ကြီး) | မေလ ၂၆ ၊ ၂၀၁၃ | တောင်ကြီးတိုင်းမ် | အမြင်ဆောင်းပါး
ပြီးခဲ့သည့်ရက်ပိုင်းအတွင်း တောင်ကြီးတစ်ကြောတွင် ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ဆိုသည့် PNO ၏ အမည်နာမ အတော်လေးကို ထင်ရှားလာသည်။ လူသိလည်း များလာခဲ့သည်။ ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသား ဆိုသည်မှာ အင်မတန်ရိုးသားသော လူမျိုး၊ အင်မတန်သစ္စာရှိသော လူမျိုးဟု သိထားကြသူများသည်လည်း PNO ဆိုသည်မှာ ထိုလူမျိုးများကို ဆိုလိုကြောင်း နဂိုရ်က မသိသေးသူများပါ သိသွားကြသည်။
ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားများကို မြန်မာအများစုက သိကြပါသည်။ ရှမ်းတောင်ပိုင်း တစ်ကြောဆိုလျှင် မသိသူ မရှိသလောက် ရှားပါးလှသည်။ လမ်းဘေး၌ အိပ်နေသော အမူးသမားကို ဖနှောင့်ဖြင့် ပိတ်ကန်၍ မေးလိုက် လျှင်ပင် ပအိုဝ်းဆိုသည်မှာ ခေါင်းပေါင်းနှင့် အနက်ဝတ်စုံဝတ်ကြောင်း ပြောပြနိုင်လောက်လေသည်။ သို့သော် ပအိုဝ်းကို သိသလို PNO ကိုတော့ လူတိုင်း မသိနိုင်ကြပါ။ အကယ်၍ သိလျှင်လည်း PNO ဟုသာ သိကြပြီး PNO ဆိုသည်မှာ ပအိုဝ်းကို ဆိုလိုကြောင်း သိချင်မှ သိပေလိမ့်မည်။
ထိုသို့ မသိသေးသူများ ခုရက်ပိုင်းတွင် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိသွားကြသည်။ သိသူတိုင်းက အံ့သြကြရသည်။ ထူးဆန်းကြရသည်။ အချို့က ကရုဏာသက်မိကြသည်။ အဘယ်ကြောင့် ထိုသို့သိရှိသွားကြ အံ့သြသွားကြ ကရုဏာသက်သွားကြရသနည်း ဆိုသော် PNO များ၏ ဥပဒေမဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ကြောင့် ဖြစ်လေသည်။ လက်နက်မဲ့သူများကို လက်နက်ဖြင့် ခြိမ်းခြောက်ကြသည်။ PNO ဆိုသည့် ပအိုဝ်းကိုယ်စားပြု ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ချို့၏ လုပ်ရပ်ကြောင့်ဟုလည်း ဆိုနိုင်သည်။ NLD ရုံးကို လက်နက်ဖြင့် ၀ိုင်းရံထားသတဲ့။
ကြားသူတိုင်းက အံ့သြကြသည်။ မေးငေ့ါထောပနာ ပြုကြသည်။ မသိ နားမလည်လေခြင်းဟု ဆိုခါ တစ်ချို့က ကရုဏာသက်ကြသည်။ ဟုတ်တော့ ဟုတ်သည်။ ကျွနိုပ်ကိုယ်တိုင်ပင် အံ့သြသွားရသည်။ PNO ကို အထင်ကြီး လေးစားလာခဲ့သော စိတ်ဓာတ်သည်ပင် ပျက်စီးချင်သလို ဖြစ်လာရသည်။ ထို့ကြောင့် PNO နှင့်ပတ်သက်သော ပအိုဝ်းလူငယ်တစ်ချို့၏ သဘောထားကို သိရှိနိုင်ပါရန် နီးစပ်သူပအိုဝ်းပညာတတ် လူငယ်တစ်ချို့ဖြင့် စကားစမြည် ပြောဆိုဖြစ်သွားသည်။ တီးခေါက်ကြည့်သည့် သဘောဟုလည်း ဆိုနိုင်ပါသည်။
PNO လုပ်ရပ်နှင့် ပတ်သက်၍ သူတို့ပြောကြသည်မှာ တစ်ကြိမ်တစ်ခါမျှဆိုလျှင် နားလည်ပေးနိုင်သည်။ သို့သော် ယခုမူ ထိုသို့မဟုတ်၊ အမှားများဖြင့် လျှောက်ရင်းလျှောက်ရင်းက စစ်အာဏာရှင် ပိုပိုဆန်လာကြောင်း၊ သူတို့၏လုပ်ရပ်က ပဒေသရာဇ်စနစ်နှင့် ခြားနားမှုမရှိကြောင်း တစ်ခုပြီးတစ်ခု ဗူးပေါ်သလို ပေါ်ပေါ်လာသည်ဟု ဆိုကြသည်။
ပဒေသရာဇ်စနစ်ကို သူတို့ (PNO ဆိုသူတို့) ကိုယ်တိုင် တိုက်ထုတ်တွန်းလှန်ခဲ့ပြီး သူတို့ကိုယ်တိုင် ပဒေသရာဇ်ပုံစံစနစ်အတိုင်း အစားထိုးကျင့်သုံးနေသည်မှာ စိတ်မကောင်းများစွာ ဖြစ်ရကြောင်းနှင့် PNO တို့၏ လုပ်ရပ်ကြောင့် ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားကို ရိုးသားသစ္စာရှိသော လူမျိုးအဖြစ် သိမြင်ယူဆထားသော ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ပင် ပအိုဝ်းကို အထင်သေးစရာ အမြင်းလွဲစရာ ဖြစ်လာစေနိုင်ကြောင်း ထောက်ပြကြသည်။
PNO အဖွဲ့အစည်းသည် ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားများအတွက် ငါတို့မှာလည်း ခေါင်းဆောင်ရှိတယ်၊ ပါတီရှိတယ်၊ ရုံးရှိတယ်လို့ ဂုဏ်ယူကြွားဝါစရာ ရုပ်ပြသက်သက်သာဖြစ်ပြီး အကျိုးပြုမှုမှာ မရှိသလောက် ရှားပါးလှကြောင်း လည်း ပြောဆိုကြပါသည်။
ထိုသို့ ပအိုဝ်းလူထုကို အကျိုးပြုမှု သိပ်မရှိပါဘဲလျက် ကိုယ့်မီး (အစိုးရ မီး မရပါ)၊ ကိုယ့်မြေ၊ ကိုယ့်ရေ၊ ကိုယ်ယာ ကိုယ့်ခြံ၊ ကိုယ့်ဥယျာဉ်၊ ကိုယ့်လုပ်ငန်း ကိုယ့်လုပ်စာ၊ ကိုယ့်ချွေးနည်းစာတို့ဖြင့် ရပ်တည် ရှင်သန်နေရသော မရှိ ဆင်းရဲသား တောင်သူလယ်သမား ယာသမားအောက်ခြေတန်းစား တောရွာနေသူ ပအိုဝ်းလူထုများကို အိမ်ထောင်စု တစ်ခုလျှင် နှစ်စဉ်အတင်းအကြပ် (၁၀၀၀၀) တစ်သောင်းကျပ်ထက် မနည်းသော အခွန်အခကို ပေးဆောင်ခိုင်းလေ့ရှိသည်မှာ သဘာဝမကျကြောင်း ယူဆသူ အများအပြား ရှိလေသည်။ ပအိုဝ်းရွာမှန်သမျှ အားလုံးနီးပါး ထိုသို့ နှစ်စဉ်ပေးဆောင်ကြရကြောင်းလည်း သိရှိရသည်။
သူတို့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဖြစ်လျှင် သို့မဟုတ် ပအိုဝ်းလူထုတို့အတွက် ပညာရေး ကျန်းမာရေး စီးပွားရေး လူမှုရေး ရပ်ရေး ရွာရေး စသည်တို့ကို ထိုက်ထိုက်တန်တန် စွန့်စွန့်စားစား လုပ်ဆောင်ပေးနေသည် ဆိုလျှင်လည်း အပြစ်တစ်ခုအဖြစ် မမြင်ပါကြောင်း လူငယ်တစ်စုက ဆိုပါသည်။ ယခုမူ ပအိုဝ်းလူထုတို့၏ ထောက်ခံမှု (မသိနားမလည် ထောက်ခံမှု) ဖြင့် ခေါင်းဆောင်နေရာ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် နေရာများကို ရယူထားပြီး ပအိုဝ်းလူထုအတွက် လုပ်ဆောင်ပေးမှု မရှိပေ။
အဘ ဦးအောင်ခမ်းထီ ကဲ့သို့သော ရှေ့ပိုင်းခေါင်းဆောင်များ ဖြောင့်ဖြောင့်မတ်မတ် ကိုယ်ကျိုးစွန့် အနစ်နာခံခဲ့သလောက် နောက်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တို့ကမူ သူတို့အကျိုးမပါလျှင် ဘာမျှမလုပ်ကြတော့ပေ။ လူထုအကျိုးထက် သူတို့အကျိုးကို ပိုကြည့်ပိုမြင်ကြလေသည်။
ပအိုဝ်းခေါင်းဆောင် ဆိုသူများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုကို လေ့လာကြည့်လျှင် အိမ်ကြီးအိမ်ကောင်း ကားကြီး ကားကောင်းများဖြင့် တစ်အိမ်မက တစ်စီးမက ကိုယ်စီအသီးသီး ရှိနေကြပါ သည်။ မယားကြီး မယားငယ် အသွယ်သွယ်တို့ဖြင့် အပျော်ခုတ်နေသူများလည်း ရှိနေကြပါသည်။ ထိုသို့ ရှိနေစေကာမူ လူထုအတွက် ဆောင်ရွက်ပေးသည်ဆိုလျှင် အပြစ်ဟု မဆိုလိုပါကြောင်း လူငယ်များက သဘောထား ကြီးကြပါသည်။ အောက်ပိုင်း ၀န်ထမ်းတို့၏ လစာမှာမူ ထောင်ဂဏန်းမျှသာ ရှိကြောင်းလည်း သိရှိရလေသည်။ ခေါင်းဆောင်များက ထိုကဲ့သို့ ချမ်းသာ ကြွယ်ဝကြသလောက် ပအိုဝ်းလူထုတို့ကမူ ဆင်းရဲတွင်း နက်လွန်းမက နက်လှချေသည်။
PNO သည် လူထု၏ အကျိုးစီးပွားကို လုပ်ဆောင်ပေးရန် မဆိုထားဘိ လူထုကိုပင် ပြန်လည်ညှဉ်းဆဲရာ အနိုင်ကျင့်ရာ ရောက်နေသည့် လုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်နေသလို မကြာခဏ ခံစားရကြောင်း ထိုလူငယ်တို့ကပင် ရင်ဖွင့်ကြပါသည်။ ဤအတိုင်းသာ “လူနှင့်မူ” အပြောင်းအလဲ တစ်ခုခု မပြောင်းလဲဘဲ ဆက်လက်ကျင့်သုံးနေမည်ဆိုပါက ပအိုဝ်းလူထုများ၏ ကန့်ကွက်တော်လှန်မှုကို ရင်ဆိုင်လာရဖွယ်ရှိကြောင်းနှင့် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲတွင် အနိုင်ရလိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်း သုံးသပ်ပြောဆိုမှုလည်း တစ်နေ့ထက် တစ်နေ့ များလာနေပါသည်။ ပအိုဝ်းလူငယ်လူရွယ် ပညာတတ်များအနေဖြင့်လည်း PNO လုပ်ရပ်တိုင်းကို ဆန်းစစ်ဝေဖန်၍ တော်လန့်သင့်က တော်လှန်ရမည်၊ ကန့်ကွက်သင့်က ကန့်ကွက်ရမည်ဟုလည်း ထောက်ပြ ပြောဆိုကြပါသည်။
PNO သည် စစ်အစိုးရနှင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲ၍ ငြိမ်းချမ်းရေး ယူပြီးသည့်နောက်ပိုင်းတွင် တစ်ချိန်က မြန်မာစစ်တပ်ကိုပင် အားကျလေသလား မပြောတတ်။ ယခင်စစ်အစိုးရကဲ့သို့ အာဏာရှင်ဆန်ဆန် ပြုမူလာကြောင်း၊ တစ်ခုခုဖြစ်လာတိုင်း အာဏာကို လက်နက်ထပ်တပ်၍ ခြိမ်းခြောက်လေ့ရှိကြောင်း၊ ပအိုဝ်းလူထုသာ အမြင်ကျယ်လျှင် သို့မဟုတ် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းသာ ပြောရဲဆိုဝံ့ရှိလျှင် PNO အတွက် နေရာသိပ်မကျန်တော့ကြောင်း၊ သူတို့သည်ပင် ကိုယ့်လူမျိုးကို ချစ်မြတ်နိုးသည့် စိတ်ဓာတ်အကြွင်း အကျန်များဖြင့် မျက်စိမှတ်ပြီး အားပေးနေရခြင်းသာဖြစ်ကြောင်း လူငယ်တို့က စိတ်မကောင်းစွာ ညည်းတွားကြပါသည်။
ဘယ်သက်သေများဖြင့် PNO ကို အဆိုးမြင်ရသနည်းဟု သူတို့ကို မေးသောအခါ သူတို့က လျပ်စစ်မီးရရေးကိစ္စ၊ ၀င်းယကျေးရွာကိစ္စ၊ ထီဟန်ဆွေးရွာကိစ္စ၊ ဆိုက်ခေါင်မြေကိစ္စ၊ ယခု နာယောင်း မောက်စံရွာကိစ္စတို့ကို ထောက်ပြကြသည်။ လျပ်စစ်မီးလင်းရေးနှင့် ပတ်သက်လျှင် PNO က ပအိုဝ်းလူထုဘက်တွင် မရပ်တည်ဘဲ မြွေပူရာကင်းမှောင့်သာ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ဟု ဆိုပါသည်။
၀င်းယရွာကိစ္စတွင်လည်း ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ချို့၏ အဂတိလိုက်မှုကြောင့် ၀င်းယရွာ ခုချိန်ထိ နှစ်ခြမ်းကွဲခဲ့ရပြီးဖြစ်ကြောင်းနှင့် ခုချိန်ထိ ၀င်းယနှင့် ပုံဆွေပင်ရွာအကြား ဘုရားမြေဆိုသည့်နေရာတွင် သားသတ်ရုံများ ရှိနေဆဲဖြစ်ပြီး တာဝန်ရှိသူတို့မှ ဖယ်ရှားခိုင်းမှု မရှိသည်ကို ထောက်ဆလျှင် PNO ၏ မူဝါဒနှင့် လူတို့၏သဘောထားကို သိရှိနိုင်ကြောင်း အကျယ်တ၀င့် ရှင်းပြကြသည့်အပြင် ၂၀၁၂ နှစ်ဆန်းပိုင်းက တောင်ကြီးတိုင်းမ်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည့် “PNO နှင့် ပအိုဝ်းအမျိုးသားတို့ သိစေဖို့” ဆိုသည့် ဆောင်းပါးကို ဖတ်ကြည့်နိုင်ကြောင်း ညွန်းဆိုကြပါသည်။
ထီဟန်ဆွေးကိစ္စတွင်လည်း PNO တို့က သေနတ်တပြပြ လုပ်ခဲ့ကြပါသေးသည်။ ထီဟန်ဆွေးသည် PNO တို့၏ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်တွင် မပါဝင်ဘဲ တောင်ကြီးမြို့ နယ်နိမိတ်တွင်သာ အကျုံးဝင်ပါသည်။ တောင်ကြီးမြို့ နယ်နိမိတ်တွင်ရှိသောကြောင့် တောင်ကြီးအစိုးရ၏ အုပ်ချုပ်မှု ဥပဒေအောက်တွင်သာ ရှိရပါမည်။ ထီဟန်ဆွေးရွာကိစ္စနှင့် ပတ်သက်လာလျှင် တောင်ကြီးအစိုးရ၏ သို့မဟုတ် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရ၏ အာဏာနှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို မေးခွန်းထုတ်စရာ ဖြစ်သွားရပါသည်။
ဆိုက်ခေါင်ကိစ္စတွင်လည်း တောင်သူလယ်သမားများ အတော်ဒုက္ခ ရောက်ခဲ့ကြရသည်။ ဖမ်းဆီးခံရမှုများလည်း ရှိခဲ့သည်။ ယခုတစ်ခါတွင်မူ ပိုဆိုးလာသည်။ လက်နက်မဲ့ NLD အဖွဲ့ဝင် ပအိုဝ်းလူထုကို PNO ဆိုသည့် ပအိုဝ်းက ပြန်၍ဖမ်းဆီးသည့်ဖြစ်ရပ်။ ပြည်သူ့စစ်ဟုသာ သုံးနှုန်းထားသော်လည်း တကယ်တမ်းမှာ ပြည်သူ့စစ် အစစ်အမှန်ဟု မဆိုနိုင်ပါ။ PNA စစ်တပ်အဖွဲ့သာ ဖြစ်ပြီး ထို PNA သည် အစိုးရနှင့် သဘောတူ နယ်ခြား စောင့်တပ်အဖြစ် အသွင်ပြောင်းခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။ PNO နှင့် PNA သည် အမည်သာ ကွဲပြား၍ ပုဂ္ဂိုလ်နှင့် ရပ်တည်မှုမှာ အတူတူဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။ မောက်စံကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများ အုပ်ချုပ်သူများ တာဝန်ရှိသူများ အပိုင်းက မည်သို့မျှပြောဆိုခြင်း မရှိသည်မှာလည်း PNO သည် သူတစ်ပါးတို့၏ အသုံးချခံ ဖြစ်နေလေသလားဟု စဉ်းစားစရာ ဖြစ်ရသည်တော့ အမှန်ဟု ဆိုရမည်။ ဘာမျှ မပြောရလောက်အောင် ပြည်သူစစ်က လုပ်ပိုင်ခွင့် ရှိပါသလား ဆိုသည်မှာလည်း အုပ်ချုပ်သူတို့အကြား အငြင်းပွားစရာ ဖြစ်ခဲ့ကောင်း ဖြစ်ခဲ့ပေလိမ့်မည်။
အကယ်၍ ပြည်သူ့စစ်မို့ အရေးယူမှု သတိပေးမှု ပြောဆိုမှု မပြုခြင်းသာ ဖြစ်သည်ဆိုလျှင် ရခိုင်လို တကယ်လိုအပ်နေသော ဒေသများ၌မူ အဘယ့်ကြောင့် ပြည်သူ့စစ်ဖွဲ့ရန် အခွင့်မပြုရသနည်း။ ယခု မောက်စံရွာကိစ္စကို ကြည့်လျှင် ဒေါ်စုပြောပြောနေသည့် တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးမှာ အားနည်းနေဆဲ ဖြစ်ကြောင်း ထင်ရှားပါသည်ဟု လူငယ်များက ထောက်ပြကြပါသည်။
လျပ်စစ်မီးကိစ္စနှင့် ပတ်သက်လျှင်လည်း တာဝန်ရှိဌာနဆိုင်ရာတို့၏ လုပ်ဆောင်မှု ပွင့်လင်းမြင်သာမှု မရှိခြင်းကြောင့် တောင်ကြီးတောင်ဘက် ကျောက်တစ်လုံးမြောက်ဘက်ရှိ ထီဟန်ဆွေး နောင်ကား နောင်ပစ် ပုံဆွေပင် ဟံဆီး စသော ပအိုဝ်းကျေးရွာများတွင် ဖိအားပေး ခံရလျက်ရှိနေပါသည်။
ထိုမီးကိစ္စမှာလည်း PNO စနက် မကင်းဟု ဆိုကြပါသည်။ ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၁ ရွေးကောက်ပွဲတွင် သူတို့ပါတီကို မဲထည့်ခိုင်းပါ မဲထည့်ပေးပါက လျပ်စစ်မီးရောက်အောင် သွယ်ပေးမည်ဟု PNO မှ တစ်ဆင့် လိမ်လည်လှည့်ဖြား မဲယူခဲ့သည်။ ထိုပါတီက အာဏာရလာသောအခါတွင်မူ မီးကားရောက်လာပါ၏။ သို့သော် တစ်အိမ်ကို (၇) သိန်းဖြင့် မယူမနေရ ယူရမည်ဟု အတင်းဖိအားပေးလာခြင်း ရှိလာသည်။ ထိုဖိအားသည်လည်း PNO မှ တစ်ဆင့် မကင်းပြန်ပေ။ မီးမယူပါက သို့မဟုတ် (၇)သိန်း မပေးနိုင်ပါက ရွာမှ နှင်ထုတ်ခံရမည်ဟုပင် ပြောဆိုမှုများ ရှိလာရုံမျှမက တစ်ပိုင်တစ်နိုင် လုပ်ဆောင်ထားသော ကိုယ်ထူကိုယ်ထ လျပ်စစ်မီးများကိုလည်း အသုံးမပြုရ၊ အသုံးပြုလျှင် အရေးယူမည့်အကြောင်း ခြိမ်းခြောက်မှုများလည်း ရှိခဲ့ပါသေးကြောင်း ပအိုဝ်းလူငယ်တစ်သိုက်ထံမှပင် သိရှိရပါသည်။
ထိုမီးကိစ္စသည်လည်း PNO နှင့် တိုက်ရိုက်ပတ်သက်မှု ရှိမရှိ သေချာမသိသော်လည်း ဆက်စပ်မှုတော့ ရှိကိုရှိလိမ့်မည်ဟု ပအိုဝ်းလူထုများ ယုံကြည်နေကြကြောင်း သူတို့က အခိုင်အမာ ပြောဆိုကြပါသည်။
ထိုကဲ့သို့ PNO အဖွဲ့တွင် ပညာတတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေထက် ပညာမတတ်သူ နည်းပါးနေခြင်း၊ ဥပဒေကို နားလည်သူတွေထက် ဥပဒေကို နားမလည်သူတွေ များပြားနေခြင်း၊ စေတနာ မေတ္တာကို အရင်းပြုသူထက် အာဏာကို မက်မောသူ များပြားနေခြင်း၊ လူထုအကျိုးထက် မိမိအကျိုးကို လိုလားသူ များပြားနေခြင်းတို့သည် ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားထု တစ်ရပ်လုံးအတွက် အနှုတ်လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းနှင့် PNO ကိုယ်တိုင်၏ ကျရှုံးမှု သရုပ်လည်း ဖြစ်လာနိုင်ပါကြောင်း ယူဆကြသလို “လူနှင့်မူ” တစ်ခုခု သို့မဟုတ် “လူနှင့်မူ” နှစ်ခုလုံး ပြောင်းလဲရန် အချိန်တန်နေပြီဖြစ်၍ အချိန်မီ မပြောင်းလဲနိုင်ပါလျှင် PNO ဘယ်လဲ၊ PNO ဘာလဲဟု မေးရတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း ပအိုဝ်းလူငယ်ထုတို့၏ ကိုယ်စား ရေးသားတင်ပြလိုက်ရပါသည်။ ။
ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားထုများ ခေတ်နှင့်အညီ လျင်မြန်တိုးတက် ဖွံ့ဖြိုးနိုင်ပါစေ။
ဒီလိုဆောင်းပါးအမြင် ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ် ရေးတာ ကောင်းပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ လုပ်ရပ် တစ်ခုကို နားတစ်ဖက်၊ အမြင်တစ်ခုထဲ မကြည့်ပဲနဲ့ သေချာဆန်းစစ်ပြီးမှ ထောက်ပြနိူင်လျှင် ပိုကောင်းမယ်လို့ မြင်ပါတယ်၊ သတင်းဆောင်းပါးကို အတင်းဆောင်းပါးလို မသက်ရောက်စေသင့်ပါ၊ ကလောင်တစ်ချက် ကြောင့် အမြင်မှား အထင်မှား အတွေးမှား တွေနဲ့ စာဖတ်ပရိသတ်တွေကို မရစေသင့်ပါ။
သတင်းဆောင်းပါးကို ဒီလိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်း လွတ်လွတ်လပ်လပ် နဲ့ ဝေဖန်ထောက်ပြနိူင်တာ ကောင်းပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ လုပ်ရပ်တစ်ခုကို အမြင်တစ်ဖက်ထဲ မကြည့်ပဲနဲ့ သေသေချာချာ ဆန်းစစ်လေ့လာပြီးမှ ထောက်ပြနိူင်လျှင် ပိုကောင်းလိမ့်မယ် လို့ထင်ပါတယ်၊ တခါတရံ သတင်းဆောင်းပါး မဖြစ်ပဲ အတင်းဆောင်းပါး ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်၊ ကိုယ့်လူမျုိးအချင်းချင်း သိက္ခာကျနိူင်သလို Negative Mind ရိုက်သွင်းသလိုဖြစ်သွားနိူင်ပါတယ်၊ လေ့လာပါ ဆန်းစစ်ပါ သုံးသပ်ပါ သေချာပြီဆိုရင် ထောက်ပြဝေဖန်ပါ၊
ကျွန်တော်ကတော့ တောင်ကြီးတောင်ဘက် ပအိုဝ်းရွာက တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားပါ ဒီဆောင်းပါးမှာ ဖော်ပြထားတာအားလုံးနီးပါး မှန်တယ်လို့ပဲ PNO ကို အားနာနာနဲ့ ပြောပါရစေ။ မီးကိစ္စလဲ အစိုးရက တစ်ဘက် သူတို့က တစ်ဘက် နှစ်ဘက်မျှစားတဲ့သဘောလို့ ကြားရပါတယ်။ PNO ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ချို့က ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတွေ လိုက်လွန်းတာလဲ မှန်ပါတယ်။ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ မီးနှင့် ပတ်သက်ရင်လဲ အဲဒီရေ အဲဒီမြေ ဘယ်သူပိုင်လဲ သိလား အစိုးရမင်းက အားလုံးပိုင်တယ်ဆိုပြီး တကယ်အခြိမ်းခြောက်ခံရခဲ့တာပါ။ PNO ခုချိန်ထိပါပဲ အမျိုးသားအတွက်ဆိုပြီး မြေတွေသိမ်း။ နောက်ပြီးတော့ တကယ်အမျိုးသားအတွက် မသုံးဘဲနဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ ရောင်းစားတာလဲ အမှန်ပါပဲ။ ခုတောင်မှ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ပြောတယ် ဂနိုင်ရေးအနားက ကန်ကြီးရွာမှာ အရင်က ရွာသားတွေ သုံးစွဲခဲ့တဲ့ ရေကန်ဧရိယာကို အစက တပေါင်းကွင်းအတွက် သိမ်းသလိုလိုနဲ့ ခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာတော့ တပေါင်းတည်ဆောက်ရေးအတွက်ဆိုပြီး (ဗန်းပြတာပေါ့) အကွက်ရိုက် ရောင်းတော့မယ်လေ။ ရေကန်ဧရိယာကို ရောင်းမှာနော်။ အဲဒါ ဘယ်လောက် မသိဆိုးဝါးလိုက်လဲ။ ရွာကလူတွေလဲ ဘယ်သူမှ မပြောရဲဘူးတဲ့လေ။ အော် ပအိုဝ်းတစ်ချို့ကတော့ ပီအင်အို မဟုတ်ဘူး ပီအွာအို ဟု ပြောင်းခေါ်သင့်တယ်တဲ့။ ပီအွာအိုဆိုတာ ပအိုဝ်းစကားပေါ့ ရသမျှ ခွာယူတတ်တဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပါ။
Khun Htun Hla said...
အလွန်ကောင်းသောဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်။ အမှန်တရားကို ရဲရဲတင်းတင်း တင်ပြထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အလွန်အကျိုးရှိ ပါသည်။ မတရားတာကို မတရားတဲ့အတိုင်းတင်ပြရဲရမယ်။ ဝေဖန်ရဲရမယ်။ အမှန်ကိုအမှန်အတိုင်းတင်ပြရဲ ရမယ်။ ဒါ ဟာ ဒီမိုကရေစီဖြစ်ပါတယ်။ သိက္ခာကို ထိန်းသိမ်းမှာလား အမှန်တရားကို ကြည့်မှာလား ဆိုတာကိုမငြင်းခုံချင်ပေမယ် ကိုယ့်လူမျိုးအတွက်ဆိုရင် အမှန်တရားနဲ့ တရားမှု ကိုဘဲ ကြည့်ရမယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ အခုဟာက နအဖ စစ်အစိုးရက လာပြီးမနှိပ်စက်ရဘဲ ကိုယ့်အမျိုးအခြင်းခြင်းက ပြန်ပြီးတော့ ညှင်းပန်းနေတာဆိုတော့ ပိုပြီးခံရခက်ပါတယ်။ ကြက်တူရွေး ကတော်တော် မယ်တော်ကကဲကဲ ပီအင်အိုရဲ စရိုက်ကို အားလုံးလဲ သိကြပါတယ်။ ပီအင်အို လုပ်လို့ အမျိုးသားဂုဏ်က္ခာကျဆင်းခဲ့ရတာလဲ အကြိမ်ကြိမ်ပါဘဲ။ သိချင်ရင်တော့ ကိုယ့်ဖါသာကိုယ် ပြန်ရှာကြည့်ပါ။ အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
KhunMg Thein said...
သေချာဆန်းစစ်ပါအရမ်းကာရောမရေးပါနဲ့.မင်းရေးလိုက်တဲ့ဆောင်းပါးကြောင့်မင်းဟာသွေးထိုးခလောက်ဆံနေတဲ့ကောင်ဆုီုတာလူတိုင်းသတိထားမိလာပြီမင်းရဲ့မမှန်ကန်တဲ့စေတနာကြောင့်မင်းလဲလူကောင်းမဖြစ်နိုင်ပါ ဒီလိုရေးလို့ငါတိုက(PAN -PNO)ဘက်နေတာလဲမဟုတ်ပါဘူသူတို့ပါတီဝင်တွေလဲမဟုတ်ပါဘူးသာမန်လူထုတစ်ယောက်ပါတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ.တိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးစည်းလုံးညီညွတ်အောင်ကြိုးစာဆောင်ရွက်နေချိ်န်မှာအချင်းချင်းစည်းလုံးမှုပျိုကွဲစေတဲ့အရေးအသားတွေကိုမရေးသင့်ပါဘူးသတိထားကြပါ။
Ice Stone said...
ကြိုးဝိုင်းထဲ ထိုးကြိတ်ကြချိန်မှာ လက်ခုတ်သြဘာပေးနေတဲ့ပရိတ်သတ်တွေရှိနေတယ်
ပြိုင်ဘက်တစ်ယောက်သက်သာ ဒါပေါ့။ခုတော့ ဒီမျှလောက်ပါပဲ။
u vicitta said...
ပအိုဝ်းတွေ အခုလိုထင်ရှားလာတဲ့အဆင့်မျိုးရောက်လာတာဟာ PNOဦးဆောင်မှုအများကြီးပါတယ်ဆိုတာ အဆိုးမြင်ဝါဒီမဟုတ်သူများ သိရှိနားလည်ကြပါတယ်။ လောကမှာ အဖွဲ့အစည်းတိုင်းမှာ စုန်းပြူးတွေပါဒှိမြဲပါ။ မကောင်းကွက်ကိုသာ ရှာပြောနေသူဟာ အဆိုးမြင်အစွန်းရောက်သူပါပဲ။ ဒါကြောင့် မကောင်းကွက်တွေကို ပြုပြင်စေလိုလို့ ထောက်ပြပေးနိုင်ရင် ကောင်းကွက်က်ုလည်း ဆက်လုပ်ဆောင်နိုင်အောင် ဖေါ်ပြအားပေးနိုင်ရမယ်။ ဒီမိုကရေစီဆိုတာ မကောင်းကွက်ကိုသာပြောပြပေးတဲ့စံနစ်မဟုတ်ပါ။ တဘက်သတ်ဆိုးကွက်ချည်းပဲပြောနေရင် အုပ်စုကွဲအောင် စည်းလုံးမှုပျက်အောင် လုပ်ဆောင်နေခြင်းပါပဲ။ ဒါကြောင့် သတိပြုရေးသားစေချင်ပါတယ်။ မျှမျှတတရေးသားခြင်းဖြင့် လမ်းမှန်ရောက်အောင် ကူညီပေးပါ။
Khun Than Aung said...
ဟုတ်ပါတယ် ကိုယ်ဒေသနှင့်ကိုယ်အချင်းချင်းကို ကိုယ်လူမျိုးက ပြန်အုပ်ချုပ်တာပဲကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ဒီကနေ့ခေတ်အခြေအနေအရဆို ကိုယ်လူထုလက်ခံနိုင် အောင်မလုပ်ဆောင်နိုင်ရင် ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာနိုင်တော့မှာ မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ်လူထုက လေးစားအားထားရလောက်အောင် လုပ်ဆောင်စေချင်တယ်။
ယနေ့လိုနိုင်ငံရေးအခြေနေမျိုးမှာ ကိုယ်အချင်းချင်းက မသင့်မြတ်ဘူးဆိုရင် အခွင့်ရေးစောင့်သူတို့အတွက် အကွက်ကောင်းဖြစ်သွားစေနိုင်တယ်။
တကယ်လို့ ကောင်းသည်ဖြစ်စေ၊ မကောင်းသည်စြေ်စေ ကြုံသလိုလုပ်သွားမယ်ဆိုရင် လူမျိုးကိုယ်စားအဇွဲ့ကိုယ်က အမျိုးကိုချစ်ရာရောက်လား၊မချစ်ရာရောက်လား။
နိုင်ငံရေးအခြေအနေအရ အမျိုးသားသင့်မြတ်ရေးကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းနိုင်ပါစေ။
ဒီဆောင်းပါးအရ PNO ဟာ လူထုအကျိုးပြု/မပြုဆိုတာကိုတော့ ဦးဏှောက်ရှိ/မျက်လုံးပါတဲ့လူတိုင်း မြင်သိနိုင်ပါတယ်။ အကျယ်တ၀င့်မပြောလိုပါ။ သစ္စာရှင်က ပြင်ပလောက ဗဟုသုတမရှိဘဲနဲ့ တစ်ဘက်သတ် အာဃာတအရင်းတည်ပြီး ရေးသားထားတာ တွေ့မြင်ရပါတယ်။ ဥပမာ- နားဘောင် ၀င်းယ မောက်စံကိစ္စတွေကို မျက်လုံးတစ်ဖက် နားတစ်ပေါက်တည်းနဲ့ ကြည့်လို့ နားထောင်လို့ အတိုက်ခံဖက်က ရတဲ့ အချက်လက်နဲ့ အဟုတ်ထင်ပြီး ရေးသားထားတာ တွေ့ရတယ်။ အဖြေမှန် တကယ်သိချင်ရင် နှစ်ဦးနှစ်ဘက်အပေါ် သေချာ စနည်းနာပြီးမှ အဖြေထုတ်ရင် ပိုမှန်ကန်ပါလိမ့်မယ်။ ခုက သစ္စာရှင်က သူလိုချင်သလို တစ်ဖက်သတ် အဖြေထုတ်ထားတာတွေ့ရတယ်။ နောက်လျှပ်စစ်မီးကိစ္စ- လက်ရှိတွေ့မြင်နေတဲ့ အနေထားအရ (၇)သိန်း မပေးနိုင်လို့/မပေးလို့ နှင်ထုတ်ခံတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် တစ်ယောက်တစ်လေမျှ မတွေ့ရတာအမှန်ပါ။ လက်ရှိ မီးလင်းနေတဲ့ ရွာတွေမှာ ငွေထဲ့တဲ့အိမ် မီးထွန်းရတယ်၊ မထဲ့တဲ့အိမ် မီးမထွန်းရဘူး-ဒါပဲတွေ့ရတာပါ။ အတင်းအကြပ်မထည့်မနေရ ဆိုတာ မတွေ့ရပါဘူး။ ဒီနေရာ နှိုင်းယှဉ်ပြချင်တယ်- မီးကြိုး+ဓာတ်တိုင် အိမ်ရှေ့ရောက်နေပြီးသား မြို့ပေါ်တွေမှာ မိမိအိမ် မီတာရဖို့ မီးလင်ဖို့အတွက် မီတာပုံး+မီးကိရိယာ+တပ်ဆင်ခအပါအ၀င် အနည်းဆုံး(၄)သိန်းလောက် အကုန်မခံဘဲ မီးမလင်နိုင်ပါ၊ ဒါကို သစ္စာရှင်ဆိုသူက သိပါရဲ့လား၊ မျက်စိဖွင့် နားစွင့်ပါအုံးနော်။ ကျေးလက်မှာက ဓာတ်တိုင်+မီးကြိုးကစ အစဆုံး တပ်ဆင်ရတယ်လေ။ (၇)သိန်းပေးရတယ်ဆိုတာ ၄င်း(၇)သိန်းထဲက အိမ်ထဲအတွက် မီးသီး+ကြိုး+တပ်ဆင်ခအပါအ၀င် တွက်ချက်ထားတယ်လေ။ မြို့ပေါ်တောင်မှ (၄)သိန်းလောက်ဆိုတော့ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။ ကဲ... သစ္စာရှင်ရေ ပြင်ပဗဟုသုတ ပြည့်ဝအောင် လုပ်ပါအုံး၊ အရာရာမှာ မျက်လုံး+နား နှစ်ဖက်စလုံး ဖွင့်ထား စွင့်ထား၊ နှစ်ဖက်လုံး မြင်အောင် ကြားအောင် ကြည့်ပါ နားထောင်ပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်။
ko theorist said...
ပအိုဝ်းလူမျိုးများသည် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်းများစွာမှ စတင်ပြီး ဤမြေဤရေဤဒေသ သို့ ရောက်ရှိနေထိုင်ခဲ့သည်မှာ လူတိုင်းအသိပင်ဖြစ်တယ်၊ ဒါပေမယ့် ကံကြမ္မာမုန်တိုင်းကြောင့် ခေတ်အဆက်ဆက်အုပ်ချုပ်သူများ၏ ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုကြောင့် မထင်မရှားဘ၀ဖြင့် မိမိလူမျိုး တိမ်မြုပ်ပျောက်ကွယ်မှု မရှိရလေအောင် နည်းလမ်းမျိုးစုံဖြင့် ဘ၀ကိုကြံ့ကြံ့ခံ လောကဓံကိုရင်ဆိုင်ပြီး အမျိုးဘာသာ သာသနာကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်လာခဲ့သည်မှာ ယနေ့တိုင်အောင်ပင်ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် အချို့သောလူပုဂ္ဂိုလ်များသည် ပအိုဝ်းလူမျိုးစုများ၏ ဖြစ်တည်မှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို မလိုလားသည်မှာ လောကဓမ္မတာပင်ဖြစ်တယ်၊ ဤမနာလို မရှု့စိမ့်နိုင်သော လူပုဂ္ဂိုလ်အချို့သည် ပအိုဝ်းအမျိုးသားများ၏ စည်းလုံးညီညွတ်သော အခြေအနေ၊ နိုင်ငံရေးအရ အမြင်ကျယ်လာပြီး လူမျိုးတစ်မျိုး၏ တန်းတူရည်တူ အခွင့်အရေး၊ ကိုယ့်ကံကြမ္မာ ကိုယ်ဖန်တီးနိုင်သော အခွင့်အရေး စသည့် ဖြစ်စဉ်များသည် ဧကန်မလွဲ ပေါ်ပေါက်လာမည်ဖြစ်ပါသဖြင့် နိုင်ငံရေးအရ၎င်း စစ်ရေးအရ၎င်း သပ်သျှိုဖြိုခွဲဖို့ ဖြစ်လာမည်မှာ ပအိုဝ်းတိုင်းသတိချပ်စေချင်တယ်။ ဒီလိုမှ မဟုတ်ဘဲ သွေးခွဲလိုသူများနှင့် ပအိုဝ်းလူမျိုးစုံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည်ကို မလိုလားသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်အချို့၊ ပါတီအဖွဲ့အစည်းအချို့၏ အကြိုက်ဖြစ်လာမည်မှာ ဧကန်မလွဲ ဖြစ်လာတော့မည်ဆိုတာ သတိကြီးကြီး ထားဖို့လိုပါတယ်။ -သစ္စာရှင်(တောင်ကြီး)၏ အမြင်ဆောင်းပါးပါ အချက်များမှာ သစ္စာရှင်(တောင်ကြီး)ဖြစ်သူသည် အခြားလူမျိုးဖြစ်ပါက မိမိဘာမှ မပြောလိုသော်လည်း ပအိုဝ်းလူမျိုးထဲမှ ပအိုဝ်းဖြစ်နေပါလျက် အလိုလို အမျိုးသားကို သစ္စာဖေါက်သော လူဖြစ်တယ်လို့ စာရေးသူ မြင်မိပါတယ်၊ သည်လောက် PNOအပေါ် သိက္ခာကျအောင် ပြိုကွဲအောင် ရေးသားနေပုံထောက်ပါက အဆိုပါ သစ္စာရှင်သည် တချိန်က PNOအပေါ် အမြင်မကြည်လင်သော သူ(သို့) ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားများ၏ ထောက်ခံမှု မရသဖြင့် အမတ်မဖြစ်လိုက်သူ (သို့) အမတ်ရူးရူးနေသူ(သို့) နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ ငွေကြေားထောက်ပံ့မှု (သို့) အဖွဲ့တစ်ခု ပါတီတစ်ပါတီ(သို့) လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရဲ့ ကြိုးကိုင်စေခိုင်းခံနေရသောသူဖြစ်သူဆိုတဲ့ လယ်ပြင်မှ ဆင်ကြီး သွားသလို ထင်းကနဲလူတွေသိနေပါတယ်။ -အဲဒီမှာ ရေးသားထားတဲ့ အရေးအသားအရ အမူးအမားကို ဖနှောင့်နှင့်ပိတ်ကန်၍ မေးလိုက်လျှင်ပင် ပအိုဝ်းဆိုသည်မှာ ခေါင်းပေါင်းနှင့်အနက်ရောင် ၀တ်စုံဝတ်ကြောင်း ပြောပြနိုင်လောက်လေသည်လို့ ရေးထားပါတယ်။ အဲဒီ ရေးသားချက်ဟာ သစ္စာရှင်(တောင်ကြီး) ဟာ အခြားလူမျိုးဆိုလျှင် ပအိုဝ်းလူမျိုးစုကို အကြီးအကျယ်စော်ကားလိုက်တယ်လို့ ဆိုချင်ပါတယ်။ ပအိုဝ်းကို ခွေး(သို့)အရက်သမားလို့ ဆိုလိုချင်ပုံရပါတယ်။ တော်တော် အမြင်ကျဉ်းတဲ့ လူမျိုးလို့ဆိုချင်ပါတယ်။ ဒါမှ မဟုတ် ဆောင်းပါးရှင်ဟာ ပအိုဝ်းလူမျိုးထဲက ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်လူမျိုးကို ပြန်စော်ကားလိုက်တဲ့ ကံကြီးထိုက်မဲ့လူလို့ ဆိုချင်ပါတယ်။ ဒေါက်တာ ဆိတ်ဖွားဟာ ဘယ်သူလဲလို့ ပြန်ဖော်ထုတ်နိုင်သလို ဖော်ထုတ်ပြီး ဥပဒေအရ အရေးယူလို့ရတယ်ဆိုတာ မင်းသေချာ လေ့လာပါအုံးလို့ ပြောချင်ပါတယ်။ ဆောင်းပါးရှင်ဟာ ပအိုဝ်းလူမျိုးဖြစ်ပြီး လက်ရှိစာရေးနေတဲ့လူကို ကျနော်အနေနဲ့ မှန်းကြည့်လို့မှန်တယ်ဆိုရင် သူကိုယ်တိုင် ပအိုဝ်းလူမျိုးပင်ဖြစ်ပြီး ထိုသစ္စာရှင်ဟာ PNOရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှု အစီအစဉ်နဲ့ရရှိခဲ့တဲ့ ကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာ ကျောင်းတက်ပြီး ပညာတတ်တစ်ဦးဖြစ်လာမည်မှာ ဧကန်မလွဲပေ၊ သစ္စာရှင် အဖေအမေ (၂)ဦး ကိုယ်တိုင် ယိုးဒယား(ထိုင်း)ကို ခွေးတိုးပေါက်ကထွက်ပြီး စီးပွားသွားရှာ ကျွန်ခံပြီး ရလာတဲ့ငွေကြေးနဲ့ ကျောင်းတက်တဲ့ဆိုတာကို ရိပ်မိပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် မိဘ(၂)ဦးက ပင်ပန်းဆင်းရဲစွာ ရရှိတဲ့ငွေကြေးနဲ့ ကျောင်းထားပေးခဲ့တဲ့ မျက်နှာကိုမထောက်၊ မိဘရဲ့ဆုံးမစကားကို နားမထောင် ဒီမိုကရေစီကို အကြောင်းပြပြီး ပအိုဝ်းလူမျိုးနှင့်PNO၊ PNOနှင့် ပအိုဝ်းအမျိုးသား နိုင်ငံရေး မြေးမှိန်အောင် ရေးသားထားသည်ကို တွေ့ရှိနေရပါတယ်။ သစ္စာရှင် ကိုယ်တိုင်ကကော ဒီလောက်သွားလာနေပြီး အလုပ်တွေ မအားမလပ်နိုင်အောင် လုပ်ငန်းတွေများပြီး ငွေကုန်ကြေးကျခံလုပ်နေနိုင်တာ ဘယ်ကငွေကြေးတွေနဲ့ လုပ်နေဒါလဲ? ဧကန္တ အခြားတစ်နိုင်ငံက တရားမ၀င် ငွေကြေးတွေ ရယူသုံးစွဲပြီး လုပ်ငန်းတွေနဲ့ လုပ်နေတယ်လို့ ထင်မြင်ယူဆမိပါတယ်။
ဒါမှ မဟုတ် သစ္စာရှင်(တောင်ကြီး)ဟာ နောက်တစ်ဦးဆိုလျှင် အမတ်ရူးရူးနေတဲ့ လူတစ်ဦးဘဲဖြစ်မှာပါ၊ ၂၀၁၅ ရွှေးကောက်မှာ လူထုတွေ သူ့ကိုမရွှေးမှာစိုးလို့ PNOနှင့် ပအိုဝ်း၊ ပအိုဝ်းနှင့် PNOဆိုတဲ့ ခွဲခြားလို့မရတဲ့ ညီညွတ်နေမှုကိုအရင်ဖြိုခွဲ၊ အရင်သိက္ခာချပြီး ၂၀၁၅-အမတ်ဖြစ်ဖို့ ရည်ရွယ်နေတယ်ဆိုတာ လူတိုင်းသိနေပါတယ်။ ၂၀၁၅-ကျရင် အမတ်တော့ ဖြစ်မှာပါ စိတ်ချပြီး နေပါ သစ္စာရှင် လွတ်တော်အမတ်တော့မဖြစ်ဘူး၊ ဇာတ်သဘင်၊ အငြိမ့်ထဲက အမတ်တော့ ဖြစ်မှာသေချာတယ်လို့ပြောလိုပါတယ်။ -သစ္စာရှင်(တောင်ကြီး)ဟာ တော်တောလေးကို နာကျည်းစရာ တစ်ခုကို စဉ်းစားပြီး ရေးချလိုက်ခဲ့တဲ့ အချက်တစ်ခုကတော့ PNO လူကြီးတွေဟာ ကားကြီး၊ အိမ်ကြီးတွေဆောက်လုပ်ပြီး စည်းစိမ်နဲ့နေထိုင်နေတယ်၊ မယားငယ်တွေယူတယ်ဆိုတဲ့ အပိုဒ်လေးကလည်း ပါလာပါတယ် လက်ညိုးထိုးပြပါ ဘယ်သူလဲလို့ တကယ်လို့ယူနေတယ် ယူခဲ့တယ်ဆိုရင် သစ္စာရှင်က ဘာကြောင့် ဒီလောက်မခံနိုင်ဖြစ်နေတာလဲ၊ (သစ္စာရှင်ရဲ့ အဒေါ်၊ အစ်မ၊ ညီမ၊ သမီး ပါနေလို့လား၊ ပါနေတယ်ဆိုရင် သစ္စာရင်ကိုယ်တိုင်ဘဲ အဲဒီ မယားငယ်ယူတဲ့ PNO လူကြီးထံသွားပြီး သစ္စာရင်ရဲ့အမျိုးတွေကို ပြန်ခေါ်လိုက်ပါလို့ ဒီလောက်ဘဲပြောချင်ပါတယ်) သစ္စာရှင် ကိုယ်တိုင်က ကိုယ့်အမျိုးကို ကိုယ်မထိန်းနိုင်ဘဲ သူများကို အပြစ်ပြောဖို့ဘဲ စဉ်းစားနေတော့ ဒီစာသားအတိုင်း ပြန်လည်ချေပ ရေးသားရဖြင်းဖြစ်ပါတယ်။ -PNOဟာ ဘာမှ မလုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့ လူထုအကျိုး အများအကျိုးတွေကို ဘာမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူးတဲ့ တော်တော်လည်း ရီစရာကောင်းပါတယ်၊ သစ္စာရှင်ကိုယ်တိုင် လူလုံးထွက်ပြပြီး လက်ရှိစာရေးနေတဲ့ ကျနော် ကိုယ်တိုင် တောင်ကြီးခရိုင်၊ လွိုင်လင်ခရိုင်ရှိ နယ်တွေ ဒေသတွေကို လိုက်ပြပေးပါမယ်။ PNOလက်ရာမကင်းတဲ့ စာသင်ကျောင်းတွေ ဆေးပေးခန်းတွေ လမ်းတံတားတွေ လက်ညိုးထိုးပြပါ့မယ်။ မယုံရင် လူထူကို မေးကြည့်နိုင်ပါတယ် အခုတော့ သစ္စာရင်ဟာ အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုပြီး PNOကို အပုတ်ချနေတယ်ဆိုတော့ သစ္စာရှင်ဟာ ဘယ်လိုလူမျိုးလည်းဆိုတာ အရူးတွေတောင် ခန့်မှန်းလို့ရပါတယ်။ - သစ္စာရှင်ပြောတဲ့ လူငယ်များဆိုတာ ဘယ်လိုလူငယ်တွေလဲ? ပြောပြပါအုံး ဧကန္တ သစ္စာရှင်ပြောတဲ့ လူငယ်တွေဆိုတာ သစ္စာရင်တို့ မလိမ့်တပတ် စည်းရုံးပြီး စုစည်းထားတဲ့လူငယ် (၄/)၅)ဦးလောက်ကို ဆိုချင်တယ်ထင်ပါတယ်။ -သစ္စာရှင်(တောင်ကြီး)ကို ပြောချင်ပါတယ် အကောင်းအဆိုး အမှားအမှန်ကို လူတိုင်းခွဲခြားတတ်ပါတယ်၊ မင်းဟာ ဘာလဲ? PNOဟာ ဘာလဲ? ဆိုတာ အချိန်တန်လျှင် ပေါ်ပေါက်လာမှာပါ စိတ်ချနေပါ သမိုင်းက စကားပြောလာပါလိမ့်မယ် အဲဒီတော့ PNOဘာလဲ? PNO ဘယ်လဲ? ဆိုတဲ့ စကားအရ PNOဟာ (၁၉၄၉-၁၉၅၈-၁၉၆၆-၁၉၇၆)ကနေ စတင်ပြီး ယနေ့အချိန်အထိ ပအိုဝ်းလူမျိုးတွေကို ဦးစီးဦးဆောင်ပြီး နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖြို့၊ ဒေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ ဆောင်ရွက်နေဆဲ ဆောင်ရွက်နေတဲ့ လူထုအခြေပြု အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ပြောပြချင်ပါတယ်၊ ရှေ့ဆက်ပြီး PNOအဖွဲ့အစည်းဟာ တောင်ပေါ်မြေပြန့်မှာ ရှိနေတဲ့ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ ရပိုင်ခွင့်တွေကို ဆက်လက်ဦးဆောင်ပြီး တက်လှမ်းသွားဖို့ သံဓိဋ္ဌာန်ချတယ်ဆိုတာ သိစေချင်ပါတယ်။ -